Muhaajiriin Soomaali ah oo dib loogu soo celiyay dalka - Halbeeg News
Muhaajiriin Soomaali ah oo dib loogu soo celiyay dalka
MUQDISHO(HALBEEG)- Waxaa xalay fiidkii gegidda dayuuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho soo gaartay diyaarad sidday 124 ruux oo Soomaali ah oo looga soo celiyay dalka ay colaaduhu ka holcayaan ee Libya.
Dowladda Soomaaliya iyo hey’adda socdaalka dunida ee IOM oo is kaashanaya ayaa ku guuleystay in muwaadiniintan Soomaaliyeed oo tahriibayaal ahaa kuna rafaadsanaa Libya ay dib ugu soo celiyaan dalka si aan khasab ahayn.
Ra’isal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa bartiisa twitter-ka ku xaqiijiyey soo noqoshada muwaadiniintan isaga oo sheegay in dowladda federaalka ay ka go’antahay wax ka qabashada dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ku haysata wadamada dibadda.
“124 muwaadin oo ku xayirnaa Libya sanado badan ayaan dib ugu soo celinnay dalkooda si ay dib ugu amba qaadaan noloshoodii caadiga ahayd, dowladda Soomaliyana waxay dadaal ku bixineysaa sidii ay u daryeeli lahayd muwaadiniinteeda meel walba oo ay dunida ka joogaan, in kabadan 1,000 qof oo Soomaali ah oo ku dac darreysnaa Libya,India , Seychelles, Eritrea,Sudan iyo Tanzania ayaan dib dalka ugu soo celinnay 12-kii bilood ee u dambeeyay” ayuu yiri ra’isal wasaare Kheyre.
Waxaa isa soo tarayay sanadkii u dambeeyay is xil-qaanka ay dowladda federaalka ah isu xil qaantay wax ka qabashada dhibaatooyinka heysta dadka Soomaalida ah ee ku sugan waddamo kala geddisan oo dunida ka mid ah haba ugu badnaadaan dadyowga ku jira xabsiyada dalalka shisheeye’e.
Shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo ehellada dadka dib looga soo celiyey waddamada qaar iyo kuwa laga soo daayey xabsiyada ayaa u riyaaqay kaalinta masuuliyadeed ee ay dowladda Soomaaliyeed ugu hiillineyso dhibbanayaasha Soomaalida ah ee ku kala baahsan dunida.
Madaxweyne Farmaajo oo qaabilay wafdiga wasiirka difaaca Turkiga
Wasiirkii garsoorka Mareykanka oo is casilay